House for Sale in Dagon Myothit (North) - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
500 Lakhs and above Houses for Sale in Dagon Myothit (North)
Township Dagon Myothit (North)
Price 500 Lakhs and above
Houses for Sale in Dagon Myothit (North)
​ေရႊပင္​လံုRose Park-1,80'x60'၊ 1ထပ္​၊ ဂရန​ေျမ၊ (5500)သိန္း။
​ေျမာက္​ဒဂံု၊ ​ေရႊပင္​လံုအိမ္​ရာ၊ Rose ...
5,500 Lakh (Kyats)
09421045692, 09785555699, 09788855333, 09266677877, 09420074367
Ad Number S-10165894
ပင်လုံလမ်းနီး40×60 1RC တိုက်သစ်
ပင်လုံလမ်းနီး 40×60 1RC 2M 1BR ပြင်ဆင်ပီး တိုက်သစ်...
3,700 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Toe Tet Htun-တိုးတက္ထြန္းအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
09788229682, 09780090925, 09788229682
Ad Number S-10164527
Toe Tet Htun-တိုးတက္ထြန္းအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ Close
မြောက်ဒဂုံ၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း (40 x 60) 1RC ရောင်းမည်။
ေျမာက္ဒဂုံ၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း (တပ...
2,550 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10164397
AMS401 #မြောက်ဒဂုံ၊ (31) ရပ်ကွက် (40 x 60) 3RC လုံးချင်း (ဂရန်) အရောင်း
AMS401၊ မြောက်ဒဂုံ၊ (31) ရပ်ကွက် (40 x 60) 3RC M-5 (ဂရန်) 💵 ဈေးနှုန်း -...
Ad Number S-10163220
**မြောက်ဒဂုံ 38ရပ်ကွက် မန္တလေးလမ်းမကြီး ဒဲ့ပေါက်လမ်းကျယ်မြေ( 40x60) 1RC...
2,100 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Min Mahar Real Estate
Ad Number S-10162879
Min Mahar Real Estate Close
AMS397 #မြောက်ဒဂုံ၊ (30)ရပ်ကွက် (20x60) 2.5RC (သစ်) (ဂရန်) ရောင်းမည်။
AMS397 မြောက်ဒဂုံ၊ (30)ရပ်ကွက် (20x60) 2.5RC (သစ်)(ဂရန်) သိန်း 3250 ...
3,250 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10162532
AMS396 #မြောက်ဒဂုံ၊ (39)ရပ်ကွက် (40 x 60) 2RC (သစ်) (ဂရန်) အရောင်း
AMS396 မြောက်ဒဂုံ၊ (39)ရပ်ကွက် (40 x 60) 2RC (သစ်) M-4,B-1(ဂရန်) သိန်း ...
Ad Number S-10162429
40 ရပ်ကွက် လမ်းမကျောကပ် 20'x60' 1BN ရောင်းမည်။
1,700 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact New Home Realty - Real Estate Agency in Yangon
Ad Number S-10179086
New Home Realty - Real Estate Agency in Yangon Close
လမ်းမကြီးနဲ့ အဝင်အထွက်နီးပြီး နေရာကောင်း၊ထောင့်ကွက်၊ အသင့်နေအိမ်ပါရှာနေတဲ့...
2,500 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact ကြည်မြန်မာစံ
Ad Number S-10178742
860 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact လွှမ်းထက် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
Ad Number S-10178473
လွှမ်းထက် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း Close
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ U9တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။
Phone No. To Contact TPL Myanmar Real Estate
Ad Number S-10178354
TPL Myanmar Real Estate Close
မြောက်ဒဂုံ ၃၇ ရပ်ကွက်ပင်လုံလမ်းမမန္တလမ်းဆုံအနီး လမ်းမကျယ်မေးတင်လုံးချင်းတိုက်လေး
3,500 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact ရတနာပုံ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္
Ad Number S-10178194
ရတနာပုံ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ Close
လုံးချင်း ၂ထပ်တိုက် အမိုးစလပ်နဲ့ အေးအေးချမ်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှာနေလိုသူများအတွက်
1,850 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Phoo Pwint Real Estate Agency
Ad Number S-10177978
Phoo Pwint Real Estate Agency Close
မြောက်ဒဂုံ ၃၅ရပ်ကွက် နေရာကောင်း မြေနှင့် တိုက် အရောင်း
Ad Number S-10177877
41ရပ်ကွက်ဦးဝိစရလမ်းနီး 40×60 2BN
2,300 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10177492
1,350 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Moe Myint Thu Realestate
Ad Number S-10177416
Moe Myint Thu Realestate Close
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် (41)ရပ်ကွက် ဦးဝိစာရလမ်းမကြီးအနီးရှိ လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည်။
4,150 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Gay Har Min Real Estate & Law Firm Services Co.,Ltd.
09260991419 09450734553 09420699669
Ad Number S-10177306
Gay Har Min Real Estate & Law Firm Services Co.,Ltd. Close